Yaab, Dhacdo & Barnaamij. – Page 30 – Saafi News Somali News & Entertainment Hindi Af Soomaali Musalsal
Yaab, Dhacdo & Barnaamij.	Dowladda Britain oo soo saartay Amar ku wajahan diyaaradaha uga imaanaya 8-Dal oo Muslim ah
March 22, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Dowladda Britain oo soo saartay Amar ku wajahan diyaaradaha uga imaanaya 8-Dal oo Muslim ah
118 Views Dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday tallaabo lagu mamnuucayo in diyaaradaha lala raaaco qalabka elektorooniga ah. Diyaaradaha tallaabadaasi ay saameyneyso waa kuwa dullimaadyada tooska ah ku taga UK ee ka baxaya dalal Muslim ah ay kamid yihiin dalalka Turkigaa, Lubnaan, Urdun, Masar, Tunisiyaa iyo Sucuudiga. Waxaa diyaaradaha dalalkaasi ka baxa ee aada UK laga mamnuucay in lala raaco, Laptop-yada, Tablet-ka, iyo ...
Soomaaliya oo ka mid noqotay shanta dal ee qaarada Africa ugu horeeya dhinaca farxada
March 21, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Soomaaliya oo ka mid noqotay shanta dal ee qaarada Africa ugu horeeya dhinaca farxada
125 Views Warbixin ay Qaramada Midoobay maalgelisay ayaa muujinaysa in Soomaaliya ay ka mid tahay shanta waddan Afrika dadka ku nooli ay ugu farxad badanyihiin qaaradda. Waxaa sidoo kale shantaasi dal ka mid ah Algeria, Mauritius, Libya iyo Morocco, oo loo aqoosaday in ay ka mid yihiin dalalka dadkooda ay dhinaca farxada ugu horeeyaan. Baarayaasha diyaariyay warbixintan ayaa waxaa ay darseen 155 ...
Mareykanka oo mamnuucay in diyaaradaha lala raaco Aaladaha qaar ee Batariga ku shaqeeya
Comments Off on Mareykanka oo mamnuucay in diyaaradaha lala raaco Aaladaha qaar ee Batariga ku shaqeeya
68 Views Mareykanka ayaa qorsheynaya in qalabka korontada ku shaqeeya ee sida Computer’s Laptop –yada iyo Tablets-ka laga mamnuuco in lala raaco diyaaradaha uga imaanaya wadammada Bariga Dhexe iyo woqooyiga Afrika. Xog laga hellay ilo wareedyo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay in tallaabadaasi ay saameyn ku yeelan doonto sagaal ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ku taga toban garoon oo ...
Kulanka Baarlamaanka oo Kooram la’aan u baaqday.
March 20, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Kulanka Baarlamaanka oo Kooram la’aan u baaqday.
72 Views Waxaa maanta baaqday Kulan lagu waday in Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay ku yeeshaan Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa ugu wacan in uu baaqdo Kooramka oo aan dhameystirmin sida uu Idaacadda Shabelle u xaqiijiyay Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan Golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa soo ifbaxayay guux ku aadan Mooshin ...
DARAASAD: Salaadda oo Yareeysa Xanuunadda Dhabarka Haleela
Comments Off on DARAASAD: Salaadda oo Yareeysa Xanuunadda Dhabarka Haleela
99 Views Daraasad cilmiyeed cusub ayaa sheetgay in dhaqdhaqaaqa joogtadda ah ay sameeyaan Muslimiintu inta lagu jiro salaadda in ay yareeyn karto laxowga/xanuunka qabyta dhabarka ugu hoseeysa,waxana sido kale ay kordhiyaan dabacsanaan xagga kala goysyadda , haddii si fiican loo sameeyo. Daraasadan oo wargeyska «The Independent» ee British ka ah uu kasoo xigtay Majalladda Caalamiga ah ee Daraasadaha iyo nidaamka Engineering ka ...
Daawo Muuqaal ” Mucjisooyinka Qur’aanka Kariimka ah ee ka hadlaya Qoraxda,Baddaha,Cirarka, iyo waxa dhici doona mustaqbalka.
March 19, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Daawo Muuqaal ” Mucjisooyinka Qur’aanka Kariimka ah ee ka hadlaya Qoraxda,Baddaha,Cirarka, iyo waxa dhici doona mustaqbalka.
128 Views Alle Weyne Subxaanahu watacaala wuxuu Qur’aanka Kariimka ah usoo dajiyay Bashar-ka, si uu ugu hago ama ugu toosiya wadada toosan, Alle Subxaanah watacaalaa wuxuu sheegay cidii raacdaa kitaabkaasi in ay ka heli doonto Nabad iyo farxad Adduunka iyo Aakhiraddaba. Isla markaana uu Qur’aanka noqon doono fariintii ugu danbaysay ee ka timaada dhanka Alle, markaana baaqi ku ahaandoonta dunidda ilaa iyo ...
Page 30 of 207« First...1020«2829303132	»	405060...Last »	Design by: Saafi Films Team.